लकडाउनका बेला बलात्कृत भएका दुई किशोरीलाई नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा जरिवाना — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विश्व > लकडाउनका बेला बलात्कृत भएका दुई किशोरीलाई नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा जरिवाना
लकडाउनका बेला बलात्कृत भएका दुई किशोरीलाई नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा जरिवाना
एजेन्सी । कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ को प्रकोपबीच रुस लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनको उल्लंघन गर्दै गत महिना रुसका दुई किशोरी राति घर बाहिर निस्किएका थिए । सोही क्रममा क्रास्नोयार्स्क भन्ने ठाउँमा ती दुई किशोरी बलात्कृत भएका थिए ।
१७ र १८ वर्षकी किशोरीहरु बलात्कृत हुनुका साथै उनीहरुको साथबाट गरगहना पनि लुटिएको थियो । किशोरीहरुले आफूहरु बलात्कृत भएको उजुरी गरेपछि रुसका प्रहरीले एक ५५ वर्षका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले ती पुरुषलाई कारवाही गर्ने बताइरहँदा पीडित किशोरीहरुलाई पनि प्रहरीले जरिवाना गरेको छ । लकडाउनको समयमा घर बाहिर निस्कने कार्य कानुनको उल्लंघन भएको भन्दै प्रहरीले दुवैलाई ३३–३३ पाउन्ड जरिवाना गरेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन ।
२०७७ वैशाख ३१ गते १६:१५ मा प्रकाशित
पर्साका १८ जना कोरोना संक्रमित घरमै
तिहारको छुट्टी केबलकार चढ्ने कि ? भाइटीकाको दिन मात्र बन्द हुने !
अब भक्तपुरको जगातीबाट पनि लाईसेन्स !
सञ्चयकोष भएकालाई फाईदै फाईदा,दुई कम्पनीको करोडौं कित्ता साधारण शेयर आउँदै !